Sidee loo cabbiraa alaabta Amazon sida iibiye pro pro?
Looma baahna in la yiraahdo in iibsade kasta oo yaqaan waa inuu ogaadaa sida loo darajeeyo alaabta Amazon si ay had iyo jeer u joogaan sare ee raadinta. Waxaan loola jeedaa in lahaanshaha sare uu yahay habka kaliya ee looga badbaado halkaa, maaddaama hagaajinta jagooyinkaaga raadinta hadda aad ka heli kartid alaabtaada si toos ah horjoogayaasha bartilmaameedsan. Sidaas, waxaan hoosta ku socdaa inaan ku tuso sida aad ufadhisid alaabooyinka Amazon sida iibiyaha dhabta ah ee dhabta ah. Aynu si dhakhso ah u orodno tallaabada soo socota ee ku saabsan hage talaabo.
Sidee loo xayeysiiyaa Amazon Products
Tallaabada Koowaad: Aqoonsiga Meelaha Diiwaankaaga Guud
U soo jeeda - on Amazon waa gabi ahaanba ka duwan yahay mid aan u lahaa matoorada search ugu weyn sida Google laftiisa. Macnaheedu waa in la aqoonsado ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah iyo inaad abuurto liiska hore ee iyaga loogu talagalay waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho qalabka Qorshaha Keydka ee Google - ugu horreyn iyo ugu horreyn. Habkaas, kaliya ma abuuraysid liiska muhiimka ah ee keywords bartilmaameedka ah si ay ula shaqeeyaan, laakiin helitaanka sawirka weyn ee dhammaan isbeddellada guud ee isticmaalka keyword.
Tilaabada Labaad: Dajinta Liiskaaga Hore ee Liiska Warbixinta Ugu Dambeeyay
Marka aad hesho liiska ugu muhiimsan ee ereyada bartilmaameedkaaga, waa wakhti aad ku yareyso. Waxaan loola jeedaa inaad u baahan tahay inaad ku nadiifiso liistada hubinta ee gaaban oo ay ku jirto kaliya ugu fiican ee muhiimka ah ee muhiimka ah iyo keydinta raadinta sheyga dheer. Habkaa, waxaan ku talinayaa isticmaalka mid ka mid ah qodobada soo socda ee muhiimka ah iyo qalab soo jeedin ah oo loogu talagalay loogu talagalay iibiyeyaasha Amazon. Inaad isku daydid in aad isku daydid mid ka mid ah - badanaa sababtoo ah waxaan labadaba tijaabiyey labadaba si aan ufadhiyaan liiska alaabada ee Amazon. Ka dib, waxa kaliya ee adiga kugu habboon in aad go'aansatid midka soo qaado.
Sellics - kaaliyahan internetka ah ayaa si gaar ah ugu faa'iideyn doona marxaladaha ugu dambeeya baaritaannada muhiimka ah. Aniga ahaan, waxaan isticmaalaa Sellics inta lagu jiro marxaladda maskaxda. Wax kastana way sahlanayd - dhamaanba waxaan u baahday in ka badan oo kaliya waxay galaan labo ka mid ah keywords bartilmaameedka ugu muhiimsan, iyo ka caawiyay qaar ka mid ah talooyinka muhiimka ah ee muhiimka ah iyo talooyin waxtar leh, kuwaas oo si toos ah uga soo jiidatay shirkadeyda ugu caansan / category ee Amazon.
Sonar - waxay cadeeyeen inay aad iigu faa'iideyeen markii aanan wali ogeyn sida leysku daro waxyaabaha Amazon sida pro. Si fudud u dhiib, qalabkan cilmi-baarista ah ee muhiimka ah waxa ay suurtogal u tahay iibsadaha kasta ee Amazon in la helo dhammaan ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah iyo isku-dhafka dheeraadka ah ee loo baahan yahay si loogu darajeeyo alaabtooda. Qalabka muhiimka ah ee Sellics, Sonar wuxuu u baahan yahay hal kelmad oo muhiim ah in la buuxiyo si uu kuugu siiyo tixraaca ugu muhiimsan ee muhiimka ah, oo lagu taageeray qaar ka mid ah jaangooyooyinka webka qiimaha leh, sida qiyaasta qiyaasta celceliska qiyaasta, isbedelka hadda isticmaalka iwm Source .